I-Microsoft Teams Download (2020) - Umhlahlandlela Wezinyathelo Ngezinyathelo - Ama-Softwares
Njengoba wonke umuntu manje avaleleke ngaphakathi ngenxa yezimo zamanje, amahhovisi afuna izindlela ezintsha zokufeza nabasebenzi. Kungaba ngamakholi wevidiyo, ukwabelana kwesikrini, izingqungquthela ezibonakalayo, nezinye izindlela. Amaqembu e-Microsoft angenye yezinhlelo zokusebenza eziholayo ezingakwazi ukuhlanganisa konke lokhu kuhlelo lokusebenza olulodwa, futhi yilokho kuphela.
Akekho manje odinga ukugxuma phakathi kwezinhlelo zokusebenza ukuze abelane ngomsebenzi wakhe noma ukuxhumana.
Ukubuka konke kwamaqembu e-Microsoft:
Amaqembu isicelo esikhishwe yi-Microsoft ngo-2017. Senziwe satholakala kuwo wonke amadivayisi, kufaka phakathi i-iOS, i-Android, iWindows ne-Mac.
Amaqembu e-Microsoft ayindawo yokusebenza ngokubambisana ekuvumela ukuthi uxhumane futhi usebenzisane endaweni eyodwa. Ngakho-ke, ungacabanga ngakho njengesixazululo ezine. Unemiyalezo yakho, okuhlangenwe nakho okucebile okususelwa engxoxweni, imihlangano yakho eku-inthanethi lapho ungahlala uxhumekile khona, kanye namakhono akho okushaya akhiwe kunethiwekhi yawo yomhlaba wonke.
Futhi, unokuhlanganiswa kwakho kwendabuko nezinhlelo zokusebenza zehhovisi ezisetshenziswa kakhulu. Ngokwengeziwe, ngakho konke lokhu kuza nokuphepha kwabo kwebanga lebhizinisi ukuvikela idatha yakho. Ezinye zezinto zokuphepha nazo ziyathutha zisuka eHhovisi, kodwa lokho kuyisihloko sesinye isikhathi. Njengoba konke lokhu kwakhiwe ezungeze isiphequluli sewebhu nezinhlelo zokusebenza, ungawela amapulatifomu phakathi kwamadivayisi.
Landa i-iTunes ku-Windows 10
Izinyathelo Ezisheshayo Zokulanda Amaqembu e-Microsoft:
Izinyathelo Zokulanda ku-Windows / MAC:
Qonda kuiwebhusayithi esemthethweni yeMicrosoftfuthi uye ku-Microsoft Office bese uyilanda nge ngokuchofoza laphaukufika kumaThimba e-Microsoft.
Ngemuva kokuthi ukulanda kuqedile, kufake ngokulandela iwizadi yokufaka. Ngenkathi ufaka, landela izinyathelo bese ufaka amafayela endaweni enesitoreji samahhala.
Uma nje Amaqembu e-Microsoft efakiwe kusistimu yakho, yakha i-akhawunti uma ungenayo noma ngena ngemvume uma usunayo i-akhawunti ye-Microsoft. Uma usuqedile, ulungile ukuhamba.
Izinyathelo Zokulanda ku-Android:
Chofoza lapha ukufaka uhlelo lokusebenza noma uvakashele i-Play Store yedivayisi yakho ye-android.
Sesha uhlelo lokusebenza ebhokisini lokusesha le-Google Play Isitolo bese ulifaka.
Ngemuva kokufaka ukungena / ukungena ngemvume ku-akhawunti yakho ye-Microsoft futhi usulungele ukuhamba.
Izici zamaqembu e-Microsoft:
IMicrosoft kuze kube yimanje ingenye yezinhlelo zokusebenza ezinhle kakhulu zemihlangano yevidiyo, futhi lokhu kungenxa yezici eza nazo. Ake sidlule kuzo ngamunye ngamunye.
Okuphakelayo komsebenzi:Yilapho uzobona khona lonke ulwazi olungena ngamaqembu. Ungasebenzisa inkinobho yokuhlunga ukuhlunga imininingwane ebalulekile ekhona.
Xoxa:Yilapho uzoba neyakho eyimfihlo ezingxoxweni ezilodwa nasezingxoxweni zeqembu lakho. Ungaphina izingxoxo phezulu ozisebenzisa njalo. Ngale ndlela, ungahlala usebenza kahle futhi ube nezingxoxo zakho zakamuva ngaphansi. Ungaqhathanisa lesi sigaba nanoma iziphi izinsizakalo zemiyalezo yanamuhla ezifana WhatsApp .
Amaqembu:Yilapho yonke imilingo yokubambisana yenzeka khona. Ungase futhi ujoyine amaqembu amaningi njengenhlangano eyodwa futhi enganquma ukuthi iyafuna yini ukuba neqembu ezingeni lomnyango noma ezingeni lephrojekthi. Wonke amaqembu anesethi yeziteshi.Iziteshi indawo yokusebenza okwabelwana ngayo lapho ungaxhumana khona futhi uhlanganyele endaweni eyodwa mayelana nesihloko esithile. Kuneziteshi ezahlukahlukene futhi. Uma isiteshi sibhalwe ngamagama agqamile, kusho ukuthi kunemininingwane emisha phakathi lapho ongakayifundi okwamanje.
Umhumushi:Uma usebenza nabantu emhlabeni wonke, ungalindela ukuthi babhale ngolimi lwabo lwendabuko. Ungakhathazeki uma ungalwazi ulimi; ngesici sabo sokuhumusha okusemgqeni, ungahumusha noma yiluphi ulimi lwesiNgisi. Ixhasa izilimi ezifika ku-44 ezahlukahlukene, futhi i-database yabo iqhubeka nokubuyekeza njalo.
Ukusebenzisana nabalingani / izivakashi zangaphandle:Lapho abantu abangaphandle kwethimba lakho befuna ukukusiza futhi banikele kuphrojekthi yakho, ungabamukela ngokusebenzisa lesi sici. Umuntu wangaphandle uzobizwa ngesivakashi. Ngakho-ke, ungazi ngokushesha ukuthi ngubani oyingxenye yenhlangano.
Ukwakha umlayezo:Ungabhala umyalezo ngezinketho ezithile zokuhlela umbhalo ocebile. Lapha ungangeza isihloko, usebenzise amaphuzu wezinhlamvu, futhi wenze umyalezo ube nenjongo. Ungaqokomisa ngisho nezinto ozizwa zibalulekile. Futhi, umbhalo we-hyperlink. Ingxenye ehamba phambili, futhi unganamathisela ifayela ukuze othile alibuyekeze. Ngezingxoxo ezithile ezimnandi, ungasebenzisa ama-emoji futhi Ama-GIF .
Izinamathiseli:Uma unamathisela okuthile lapha, ilayisha ifayela endaweni yokugcina yeqembu lakho. Okutholakala kalula phezulu kwekholomu yeqembu. Ekupheleni emuva, uzobe usebenzisa i-SharePoint, ngakho-ke zonke izici zizotholakala kumaqembu. Ungalayisha futhi i-Excel noma i-PowerPoint noma enye imibhalo futhi ngokushesha uqale ukusebenzisana nabalingani bakho beqembu. Iba namandla kakhulu kumuntu ojwayelekile ukuyilanda bese eqala ukuhlangana namaqembu.
Ukuphathwa kwephrojekthi (i-Power BI):Ungenza ngendlela oyifisayo indawo yokusebenzela owabelane ngayo usebenzisa lesi sici. Ungakwenza lokhu ngokuphina ifayili noma ngokungeza insiza noma insiza evela eceleni. Unokuqukethwe kwakho ngesikhathi sangempela, ngokuchofoza nje kude. Amathuba awapheli kulesi sigaba. Ungaphinda uhlanganise uhlu lwezinto okufanele zenziwe. Akuzona izicelo ze-Microsoft kuphela. Isitolo sabo sohlelo lokusebenza sinezinhlobonhlobo zezinhlelo zokusebenza ezizokusiza kakhulu kumaphrojekthi akho.
Imihlangano nekhalendaAmaqembu e-Microsoft anesisombululo esiphelele somhlangano. Ixhasa ukwabelana, ividiyo, kanye nengqungquthela yomsindo. Kukhona isikhala lapho ungabuka khona imihlangano yakho yansuku zonke. Ungahlela futhi imihlangano yakho kusuka endaweni yesikhulumi. Ungakha futhi umcimbi obukhoma ongabamba abahlanganyeli abangafika kwabangu-10 000 futhi ubambe iqhaza ngesikhathi sangempela.
Ikholomu yemihlangano:Lapha, ungabona yonke imihlangano ehleliwe, ababekhona, uxoxe nabahlanganyeli; futhi ungasetha iziteshi zengxoxo ezisuselwa embhalweni. Ungachofoza ukujoyina, futhi esinye sezici ezinhle kakhulu zamaqembu ukuthi: ngaphambi kokujoyina umhlangano empeleni, kunikeza isikrini sokujoyina ngaphambi kwesikhathi. Uma ufuna ukuthulisa imakrofoni yakho, noma uvale ikhamera yakho, vala umsindo. Uma abantu abaningi bangenelwe ngaphambili ocingweni, i-Microsoft Team izothulisa inkinobho yemakrofoni ngokuzenzakalela.
Ukwabelana emhlanganweni:Uma uchofoza inkinobho yokwabelana, ungabelana ngedeskithophu yakho uma ufuna lokho. Futhi ungabelana ngamawindows ngamanye usebenzisa amandla wohlelo lokusebenza akude, noma amafayela we-PowerPoint, noma amanye amafayela wedokhumenti ayingxenye yamadokhumenti wakho asanda kusetshenziswa.
Umphumela we-Blur:Ungafiphaza isizinda sakho ukuze uhlale ugxile emhlanganweni. Lokhu futhi kukusiza ukuthi ugcine ubumfihlo obufunayo.
Ukuqopha:Bangeze nekhono lokurekhoda imihlangano yenu. Lokhu kuyasiza uma uphuthelwa umhlangano, noma ufuna ukubuyela emuva ukuwubukeze. Ifayela elirekhodiwe lingena esigabeni sokuthuthukisa seqembu. Ungachofoza kuyo bese ubuka wonke umhlangano.Kwesinye isikhathi uma ungenaso isikhathi sokubuka wonke umhlangano, nezinsizakalo zabo zokubhala ezinikwe amandla yi-Microsoft Stream, ungavula amazwibela bese ubona kahle lokho okushiwoyo. Kepha nakhu ukubamba futhi ungasesha amagama angukhiye athile. Lapho uthola umphumela wakho owuthandayo, ungachofoza kulokho, futhi ukuqoshwa komhlangano kuzokweqela kulelo phuzu elithile. Futhi kuyisici esihle ukubona ukuthi ukhulunyiwe yini emhlanganweni noma cha.
Ukushaya kwe-PSTN:Unakho konke ukulawula kwakho kwekholi lapha; inombolo yakho yocingo, unokudayela kwakho okusheshayo, izintandokazi zakho, kanye nabo bonke oxhumana nabo, umlando wakho wekholi, kanye nevoyisimeyili yakho.
Isikhungo sabaphathi bamaqembu:Yilapho ungaphatha khona zonke izici ezizungeze amaqembu njengokuthumela imiyalezo, imihlangano, nezinye izilungiselelo ze-org-wide. Ungahlola amaqembu, futhi ungabona wonke amanye amaqembu owadalile. Ungahlela esivele ikhona noma wakhe iqembu elisha sha. Esigabeni somsebenzisi, uzobona bonke abasebenzisi kumaqembu akho. Kukhona nezinqubomgomo ongazabela emihlanganweni oyisingathayo. Isigaba Sokuthumela Imiyalezo sichaza isipiliyoni sengxoxo onaso nothile.
Amaqembu e-Microsoft: Ubuhle nobubi bawo
Bangakwazi ukuhlinzeka ngezici okungekho omunye umuntu ancintisana naye ocabanga ukuzenza.
Banokuphepha okuhle kakhulu njengoba kuhlanganiswe neHhovisi 365.
Njengoba iMicrosoft inamaseva amakhulu, ikhwalithi yemihlangano ingcono kakhulu uma iqhathaniswa.
Ukusekelwa ngezinhlelo zokusebenza zeMicrosoft kusiza ukusebenzisana.
Kudinga isivinini se-inthanethi esizinzile ukwenza amakholi wevidiyo ephezulu
Amaqembu e-Microsoft angaphathwa ngendlela efanayo lapho uphatha ngayo yonke ingxenye yakho ye- Ihhovisi 365 izinhlelo zokusebenza. Ungakhathazeki ngokuphepha. Izilawuli ezifanayo ozisebenzisayo esikhungweni sokuhambisana nokuphepha futhi uzisebenzise kumaqembu. Kungcono kakhulu ezinhlanganweni ezifuna ukwamukela okujwayelekile okusha. Ngiyethemba uthole umbono othile ngamaThimba eMicrosoft ngemuva kokufunda ngendatshana yethu. Uma uneminye imibono noma imibuzo maqondana Namaqembu E-Microsoft, lifake ebhokisini lokuphawula elingezansi.
I-Safari ye-Windows 10
Ama-Emulators ama-5 ahamba phambili we-Android we-PC